Sunday February 10, 2019 - 08:28:00 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Wasiirka ugu tayada liita golaha xukuumadda Wasiir Sacad wuxuu dilay sumcaddii Qaranka. Miisinayadda dalka waxa lagaga doodaa golayaasha sharci dejinta ama baarlamaanka. Kuwaas oo dadku soo doorteen, run ahaana metelaya shicibka Somaliland oo dhan, mucaarid iyo muxaafidba. Iyagaa loo igmaday, loona dhaariyey arrimaha qaranka oo ay miisaaniyaddu ka mid tahay. Iyagaa ilaalinaya "sida caadiga ah" danaha iyo siraha qaranka.
Wuxuu beeniyey heshiisyadii dekedda iyo madaarka Berbera ee dawladdii hore soo bandhigtay ee wasiirkii hore marwo Samsam baarlamaanka Ka faahfaahisay berigii waxa dhaqaale sannad walba innaga soo geliya. Midda kale waddada Berbera - Wajaale sidii dawladdii hore sheegtay waxay ku jirtay heshiiskii dekedda, saldhigga hortiiba. Sacad wuxuu u muuqdaa nin aan mudnayn Wasiir Maaliyadeed. Mise wuu is nasakhayaa illeen waaba aqoon yahane? Muxuuse madaxwaynuhu halkan u dhigtay? ma jileeca awgeed baa? Oo hantida Ummaddaa laga fara-maroojisan karayaa? Bal adba!